.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: TZ NEWS Reader (Version 5.0).apk
TZ NEWS Reader (Version 5.0).apk
Android Phone + Tablet တွေအတွက် နည်းပညာသတင်းတွေ ၊ ပြည်တွင်းသတင်းတွေ၊ စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေး ၊ဘောလုံးပွဲနဲ့ ပက်သက်သော သတင်းများ၊ IT နည်းပညာနဲ့ ပက်သက်သော သတင်းများ၊စာပေ ၊သုတ၊ရသ ၊သီချင်းများ နဲ့ ပက်သက်သော သတင်းများကို APK တစ်ခုထဲ ရှိယုံနဲ့ သတင်းပေါင်းစုံတွေကို ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်​​သော Source ​တွေက​တော့
နောက်ဆုံးရသတင်းများ မဖတ်ရသေးသော သတင်းများ မှတ်သားထားသော သတင်းများ
အေးချမ်းမွန် The Free Note MOI Myanmar Forward Popular Myanmar News ပြည်သူ့ခေတ် Eleven Media Group စံတော်ချိန် မြ၀တီ မိုးမခ The Voice ဧရာဝတီ RFA7Days News ရိုးရာလေး ပြည်သူ့လွှတ်တော် Mizzima Planet Myanmar Network မှုခင်းသတင်း Yesagyo Posts
ကုန်စည်ဒိုင်များ ကားဈေးကွက် Jobs & Opportunity
EURO MFF ဘောလုံးပေါက်ကြေး (LIVE)
ဖုန်းဆိုင်များ Today's Technology Smart Pro Digital Life TechSpace Journal Myanmar IT Sky မောင်ပေါက် IT Group MMSD ၀င်းကမ္ဘာကျော် မောင်စွယ်စုံကျမ်း ညီနေမင်း ဆေးရိုးသည် MM IT Helper MMAS MM Android Developers
ကောင်းသန့် စာပေ Kyaw Thu
သုတစွယ်စုံကျမ်း ရသ စာစုများ ကဗျာ ကျန်းမာရေး အချစ်စာတိုများ ဟာသ Ghost Story
စသည်​ဖြင့်​ ကဏ္ဍ စုံလင်​စွာ ထည့်​သွင်း​ပေးထားပြီး TZ NEWS Ver (3.0)မှ စ၍
18+ကဏ္ဍ ထည့်​သွင်းထားခြင်းမရှိ​ပါသဖြင့်​ ကျား၊မ မ​ရွေး အဆင်​​ပြေ​ပြေ အသုံးပြုနိူင်​ပါတယ်​။
TZ NEWS READER.apk(Version 5.0) ကို ​​အောက်​ပါလင့်​တွင်​ ​ဒေါင်းလုပ်​ရယူ အသုံးပြုနိူင်​ပါသည်​။
Posted by FlashSongCrazy at 02:47